कुखुरी काँ, बासी भात न खा
जनक बिहान आफ्नो ओछ्यानबाट उठ्यो । लामो हाइ काढ्यो । ऊ आँगनमा पुग्यो । उसले रातो घाम उदाएको देख्यो । आँगनवरिपरिका रूखहरूमा चराचरुङ्गीहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै रमाइरहेका थिए । जनकले खोरबाट कुखुराहरू छाडिदियो । ठूलो सिउर भएको रातोभाले पर्खालमा चढेर गर्धन तन्काई तन्काई बास्न थाल्यो, ‘कुखुृरी काँ..आँ..आँ…, बासी भात न खा..आ..आ…।’
माथि आकाशमा एउटा चील उडिरहेको थियो । त्यसले कुखुरीको चल्लो टिप्ने दाउ गरिरहेको थियो । तर रातोभालेले ती चल्लाहरूको रेखदेख गरिरहेको हुँदा चील निराश भयो ।
जनक र निर्मल जनककै कोठामा लेखपढ गर्न लागेका थिए । उनीहरूको घरमा बिजुलीबत्ती थिएन । लालटिनको प्रकाशले काम चलाउँदै थिए । यस्तैमा त्यो कोठामा दुईवटा मुसा पसे । तिनीहरूले दराजको किताब तानेर बाहिर लैजान थाले ।
निर्मलले चिच्याएर भन्यो, ‘जनक, मुसा, मुसा…।’
जनकले हातकै किताबले झटारो हिर्कायो । तब त मुसाहरू कुलेलम ठोके ।
बिहान जनककी आमा गोठमा गाई दुहुन लागेकी थिइन् । जनक र निर्मल पनि आइपुगे । निर्मलले गाईको पुच्छरमा समाएको मात्र थियो, गाई दच्किएर लात्ता झट्का¥यो । सन्जोगबश जनकलाई लागेर गोबरमा पछारिन पुग्यो । पहिले त निर्मललाई रमाइलो लागेर हाँस्यो । तर पछि साथीसँग माफी माग्दै साबुन-पानीले गोबर पखालिदियो ।
केही समयपछि जनक र निर्मल गाईको बाच्छो र बाख्राको पाठोसँग खेल्न थाले । वातावरण रमाइलो थियो । जनकले पाठोलाई कलिलो घाँस खान दियो । निर्मलचाहिँ स्याउला देखाउँदै बाच्छोसँग खेल्न थाल्यो ।
आमाले जनक र निर्मललाई दूध र रोटी खान दिँदै भनिन्, ‘तिमीहरू यो खाजा खाएर पढ्न जाओ । मचाहिँ खाना पकाउन भान्छामा जान्छु ।’
दुवै केटाहरू खाजा खाएर कोठाभित्र पसे । केही समय पढेपछि खाना खाने बेला भयो । खाना खाइवरी दुवैजना स्कुल जान तयार भए ।
जनकले भन्यो, ‘तपाईँ पनि स्कुलमा जानपर्छ है आमा । आज त अभिभावक दिवस हो नि ।’
आमाले भनिन्, ‘हुन्छ । म घरको धन्दा सकेर आउँछु । तिमीहरू जाँदै गर ।’
स्कुलमा जनक र निर्मलका अभिभावकहरू पनि उपस्थित भए । प्रधानाध्यापकको हातबाट जनक र निर्मलले पनि पुरस्कार थापे ।
त्यही रातको घटना हो । कोठामा जनक एक्लै सुतिरहेको थियो । त्यसै बखत चार—पाँचवटा मुसाहरू आएर जनकलाई सताउन थाले । ऊ हैरान भएर चिच्यायो, ‘हे भगवान् ! म के गरूँ यी मुसाहरूलाई ?’
छोराको समस्या हल गरिदिन आमाले एउटा बिरालो ल्याइदिइन् । त्यो बिरोलो पाएर जनक दङ्ग प¥यो । जनकलाई राति उसको बिरालोले उठाइदियो ।
जनक अचम्म मान्दै करायो, ‘ओ माइ गड् ! एकै पटकमा तीन-तीनवटा मुसा मारेको तैँले ?’
जनक हर्षले बेसरी चिच्यायो । ऊ नाच्न थाल्यो । उसकी आमा ‘के भो के भो’ भन्दै कुदेर आइपुगिन् । त्यहाँको दृश्य देखेर उनी पनि छक्क परिन् !